जलन फाउण्डेशनको आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२० श्रावण २०७७, मंगलवार १४:३८ English
काठमाडौँ, २४ असार । नेपाल जलन फाउण्डेशनले रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् नेपाल बार एशोसियनका केन्द्रिय सदस्य अधिवक्ता बालकृष्ण गैरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासचिव डा. किरण नकर्मी समेतले रक्तदान गरेका छन् ।
स्याङ्जा पुर्खौली थलो र चितवनमा जन्मिएर हाल काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाएर वकालत पेशा गर्दै आएका गैरे अधिवक्तासँगै सामाजिक अभियानमा पनि लागेका छन् । उनका अनुसार रक्तदान कार्यक्रममा ३६ दाताले रक्तदान गरेका छन् । किर्तीपूर अस्पतालमा भएको कार्यक्रममा रक्तदाताहरुलाई फाउण्डेशनले प्रमाणपत्र पनि वितरण गरेको छ ।
डा. पेरु प्रधानको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा सचिव साधुराम महर्जन, कोषाध्यक्ष हेमन्तध्वज जोशी लगायत सहभागी थिए ।
आगो, तातो झोल पदार्थ, पेट्रोल, तेजाव, एसिड आदिले पोलिएकाहरूको लागि तत्काल उद्वार, उपचार र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्य गर्ने तथा पोलाईसम्बन्धी जनचेतना, त्यसबाट बचाउ र प्राथमिक उपचार आदिको संदेश जनसमुदायबीच पुरर्याई सोबाट बच्न र संभावित क्षति न्युनिकरण गर्ने काम गर्दै आएको यो संस्थाले छाला दान गर्न ईच्छुक व्यक्तिहरूको छाला संकलन गरि प्रत्यारोपण गर्ने, मरणोपरान्त छाला दान गर्न ईच्छुकहरूको छाला संकलन गरि छाला दानका क्षेत्रमा समेत कार्य गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव महर्जनले गरेका थिए भने व्यवस्थापनको कार्य कोषाध्यक्ष जोशीले गरेका थिए ।
२४ असार २०७७, बुधबार ०९:१३ मा प्रकाशित